Bit By Bit - Running fanandramana - 4.4.2 Heterogeneity ny fitsaboana vokatry
Ny fanandramana dia mandrefy ny vokany amin'ny ankapobeny, saingy mety tsy mitovy amin'ny an'ny rehetra ny vokatra.
Ny hevitra manan-danja faharoa momba ny fialana amin'ny fanandramana tsotra dia ny tsy fahampian'ny fiantraikany amin'ny fitsaboana . Ny fanandraman'i Schultz et al. (2007) maneho amin'ny fomba mahery vaika ny fomba ahafahan'ny fitsaboana mitovy fiantraikany amin'ny karazan'olona samihafa (sary 4.4). Na izany aza, ny mpikaroka dia nifantoka tamin'ny fiantraikan'ny fitsaboana amin'ny ankamaroan'ny fanadihadiana, satria nisy mpandray anjara marobe ary kely no fantatra momba azy ireo. Amin'ny fanandramana nomerika, na izany aza, matetika dia maro ireo mpandray anjara ary maro no fantatra momba azy ireo. Ao anatin'izany tontolo manodidina ny tontolo iainana izany, ireo mpikaroka izay manohy manombantombana fa ny fitsaboana amin'ny ankapobeny dia tsy hanadino ny fomba hanombanana ny fomba hikarakarana ny fitsaboana, ny fomba ahafahana manatsara ary ny fomba hikendrena azy ho an'ireo izay mahasoa kokoa.
Ohatra roa momba ny tsy fahampian'ny fihenan'ny fitsaboana dia avy amin'ny fikarohana fanampiny momba ny Home Energy Reports. Voalohany, Allcott (2011) nampiasa ny habeny lehibe (600.000 tokantrano) mba hanaparitahana bebe kokoa ny ohatra ary hanombatombana ny vokatr'ilay tatitra momba ny angovo momba ny angovo ao an-trano araka ny fahaverezan'ny fampiasana angovo eo aloha. While Schultz et al. (2007) nahita fahasamihafana teo amin'ireo mpampiasa mavesatra sy maivana, Allcott (2011) fa misy ihany koa ny fahasamihafana ao anatin'ny vondrona mavesatra sy maivana. Ohatra, ireo mpampiasa mafana indrindra (ireo ao amin'ny decile ambony) dia nampihena ny fampiasany angovo avo roa heny noho ny olona iray eo afovoan'ny vondrona mpampiasa mavesatra (tarehimarika 4.8). Ankoatra izany, nanombana ny fiantraikan'ny fitondran-tena mialoha ny fitsaboana koa dia nanambara koa fa tsy nisy ny vokatra boomerang, na dia ireo mpampiasa maivana indrindra aza (4.8).
Sary 4,8: ​​Heterogénity ny fiantraikany amin'ny fitsaboana any Allcott (2011) . Ny fihenan'ny fampiasana angovo dia tsy nitovy tamin'ireo olona manana elatra amam-borona. Nampifanarahina tamin'ny Allcott (2011) , faha-8.
Ao amin'ny fandalinana iray mifandraika amin'izany, Costa and Kahn (2013) nihevitra fa ny fahombiazan'ny Home Energy Report dia mety miovaova arakaraka ny ideolojia politikan'ny mpandray anjara ary mety hiteraka olona manana hevitra ideolojika hampitombo ny fampiasana herinaratra ny fitsaboana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia nilaza izy ireo fa mety hampisy boomerang ho an'ny karazan'olona sasany ny Home Energy Reports. Mba hanombanana io fahafaha-manao io, dia nametraka ny angon-tsoan'ny mpanjifany i Costa sy Kahn miaraka amin'ny angon-drakitra nangonina avy amin'ny vondrona mpiady antoko fahatelo izay ahitana ny fampahalalam-baovao toy ny antoko politika, fanomezana ho an'ny orinasa momba ny tontolo iainana, ary ny fandraisana anjaran'ny fianakaviana amin'ny programa angovo azo havaozina. Tamin'ny alalan'io tahirin-tserasera io dia hitan'i Costa sy Kahn fa ny vokatr'ireo angovo momba ny angovo ao an-tokantrano dia niteraka vokatra mitovitovy amin'ny mpandray anjara amin'ny ideolojia samihafa; Tsy nisy porofo fa nisy vondrona iray naneho boomerang (sary 4.9).
Sary 4.9: Heterogénity ny vokatry ny fitsaboana any Costa and Kahn (2013) . Ny fiantraikan'ny fitsaboana amin'ny salan'isa ho an'ny samples iray dia -2,1% [-1,5%, -2,7%]. Taorian'ny fampifangaroana ny vaovao avy amin'ny fanandramana momba ny fianakaviana, Costa and Kahn (2013) nampiasa andian-tsarimihetsika maromaro mba handinihana ny vokatr'ilay fitsaboana ho an'ny vondron'olona manokana. Tombanana roa no aseho ho an'ny vondrona tsirairay satria miankina amin'ireo covariate izay nampidiriny tao amin'ny modely statistika (jereo ny modely 4 sy 6 ao amin'ny latabatra 3 sy 4 ao Costa and Kahn (2013) ). Araka ny asehon'ity ohatra ity dia mety ho samy hafa ny fatran'ny fitsaboana ho an'ny olona samihafa ary ny tombantomban'ny fitsaboana azo avy amin'ny modely statistika dia miankina amin'ny antsipiriany ireo modely ireo (Grimmer, Messing, and Westwood 2014) . Nifanaraka tamin'ny Costa and Kahn (2013) , latabatra 3 sy 4.
Satria ireo ohatra roa ireo dia maneho, amin'ny vanim-potoana nomerika, afaka mandroso isika amin'ny fanombantombanana ny fiantraikan'ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny fanombanana ny tsy fahampian-tsakin'ny fitiliana amin'ny fitsaboana satria afaka manana mpandray anjara maro isika ary mahafantatra bebe kokoa momba ireo mpandray anjara ireo. Ny fianarana momba ny fihanaky ny fitsaboana dia mety ahafahana mikendry fitsaboana iray izay mahomby indrindra, manome zava-misy izay mamporisika ny fivoaran'ny teoria, ary manome toro-hevitra momba ny mety ho fepetra azo atao, ny lohahevitra izay ahitako izao.